13/05/2021 13/05/2021 adminLeaveaComment on २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : तपाईंको जीवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ !
हिजोको दिनहरू बितिसकेको छ, उसको मीठो सम्झनामा पनि म खुशी छु.भोलिको बारेमा थाहा छैन, पर्खाइमा पनि म खुशी छु. हाँस्दै खेल्दै बित्दै छ समय, आज मा पनि म खुशी छु. जिन्दगी छ छोटो, हरेक पल म खुशी छु । यदि यि माथिका लेखहरु मनमा छुयोभने जवाफ दिनुहोस्। नत्र त म बिना जवाफमा पनि खुशी छु ।